War Deg Deg:- Dagaalka Boosaaso oo xoogeystay, khasaaraha jira & dhimashada +SAWIRRO | Entertainment and News Site
Home » dagaal » News » War Deg Deg:- Dagaalka Boosaaso oo xoogeystay, khasaaraha jira & dhimashada +SAWIRRO
War Deg Deg:- Dagaalka Boosaaso oo xoogeystay, khasaaraha jira & dhimashada +SAWIRRO
daajis.com:- Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaal culus oo weli ka soconaya magaaladda Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland, kaas oo u dhexeeya ciidammada Amniga Puntland iyo Ciidanka Hay’adda PSF.
Dagaalka oo bilowday saacado kahor ayaa sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah, kaas oo soo gaaray dhinacyada dagaalamaya iyo dad shacab ah. Goobjoogayaal ayaa sheegay in dhimashadu ay gaarayso ilaa 8 ruux, halka dhaawacu uu intaas ka badan yahay.
Ciidammada Puntland ayaa xiray dhamaan waddooyinka gudaha magaalada Boosaaso, iyo kuwa soo gala magaalada, waxaana wararku ay sheegayaan in ciidammo cusub lagu daabulay agagaarka Madaxtooyadda iyo xarunta ciidanka PSF.
Ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Xukuumadda Puntland, kuwaas oo ku aadan dagaalka ka soconaya Boosaaso.
kuwaana Akhriso Caadi Ma Ahan: dagaal, News